“Kan Eboon Isaa Dhiiga Hin Qabnetuu Arrabni Isaa Dhiiga Qaba” – Kichuu
HomeAfaan Oromoo“Kan Eboon Isaa Dhiiga Hin Qabnetuu Arrabni Isaa Dhiiga Qaba”
Biyya lafaa kana irratti mootummaan gabroomsaan afaan Qawwetiin aangotti ol bahe kamuu sirna bulchiinsa ummataa (Democracy) haqaa gaggeessuun biyya bulchu keessatti fedhii fi dantaa ummataa tiksee hin beeku; tiksiisuus hin danda’u. Impaayera Itiyoophiyaa keessattis mootummoota gita bittoota habashaa dhufoo lufoo irraa ummattoota biyyattis ta’ee Ummanni Oromoo “ Tiisisa irraa Damma hin
( Oromia Press) — eegan’’akkuma jedhamu mirgaa uumaan qabu sarbamuu, Qe’ee fi qabeenya isaa samamee biyyarraa baqachiifamuu, gaaffii tokkoon ala jumlaan qabamee hidhamuu fi itti qiyyaafatamee adda keessa rukutamuun ajjeefamuu irraa kan hafe kabaja mirga uumamaas ta’ee faaydaan argate tokkolee hin turre; si achiis hin jiraatu.
Har’as tooftaa fi tarsiimoon bulchiinsa ishee gooltummaadhaan kan guuttame mootummoota gabroomfatoo Itiyoophiyaa dabran irraa oli malee gadi kan hin tanee mootummaan Wayyaanee, Waggoota 26f afaan Qawweetti fayadamuun ummattoota biyyattii ukkamsitee bulchaa as geesse. Baroota aangoo ishee kana keessattti mootummaan gabroomfattuun Wayyaanee tooftaa fi tarsiimoo jireenya ishee Ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gadi dhaabbachuuni jireenya qananii jirtaataa kan turtee fi jiirtu.
Kanaanis jalee fi lukkee ishee ADEETItti oomishtee baste OPDO ulee godhattee dhaddhabachuni qabeenyaa fi lafa Oromoo saamtee kan dhimma itti bahaa jirtuu. Kanas kan hojii irra ittin oolchaa jirtuun tooftaa fi karoora mootiin isaanii muummichi ministeraa duraanii baanamu Mallas Zeenawii lafa kawee darbe, “ dachee Oromoo Oromiyaa bal’oo jettan tana dhiphisuu fi Ummata Oromoo guddaa jettan kana xiqqeessuun ni danda’ama”jedhetti dhimma bahuni.
Kun kanaan osoo jirruu Lukkeen Wayyaanee OPDOn kanneen dhoortoo yeroo qofaaf jiraatan ergama diinaa fudhatanii ummata Oromoo afan-fajjii itti uumaa jiru. Wayyaaneen yeroo galaanni qabsoo ummataa guutee irra garagalutti , ummata tasgabbesitee umrii bittaa ishee dheerafachuuf jecha, dhagaan hin falaxnee fi Qileen isheen buutee hin bane hin jiru. Akka kanaanis Tibbana P.r Mootummaa naannoo Oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaatiif waltajjilee afan-fajjii adda addaa uumuufin akka inni Ummata Oromoo sobee Sossobee gabrummaa jala tursiisuuf karoorri abaramaan kun Wayyaaneen baafamuun waan nama wal gaafachiisu miti.
Karoora Shiraa Abaaramaa tiba kana keessa Ummata Oromootti afan-fajjii uumuuf xaxan keessaa ajandaan jijjiraa Qubee Afaan Oromoo, Faayida addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jechuun Ibsa Manni Marii Ministerootaa Wayyaanee baasee fi handhuura Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti Siidaan Abbootii Irree Nugusa Itiyoophiyaa baanamu Hayla Sillasee fi Mootii Wayyaanee Mallas Zeenaawiitii haa ijaaramu kanneen jedhaman cufti isaaniituu dhimmoota eenyummaa Oromoo balleessuu irratti fullefatan dubbii fardii Oromoon ofitti cal’isuu hin qabne kan hatattaamaan fala barbaaduu dha.
Ergama diinaa jechoota mimmi’awoo irra Daamman dibee keessa isaa ammo Ebicha itti tuuluun Pr.Lammaan waltajjilee adda addatti bahuun oggaa haasawu:- “‘Qeeransa Egee hin qabn qaban gadi hin dhiisan’ kanaaf faaydaa fi fedhii ummata keenyaa tiksuun amaanaa ummataa yeroon ittin galma geesifnu amma, Akka biyya keenyaatti faayidaan nuti eegsifannus heera mootummaa biyyatti bu’uura godhachuun ta’a, Wixineen faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdi jedhu quba qabeenya hayyoota Oromoo fi ummata Oromootiin ala hojii irra hin oolu, Yoomiyyuu taanaan faayidaa ummata Oromoo haamilee ittiin dabarsinee laannu hin qabnu, Jijjiiramaa fi bu’aa ummata Oromoo mirkaneessuuf garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabnu cinaatti dhiifnee beekumsaa fi dandeettii qabnuun faayidaa hawaasa keenyaarratti tokko taanee hojjechuu qabna, Haqa ummataa akka fanjiitti xuquuf sodaatamaa ture yoo xinnaatee xinnaate saanduqa inni itti saamsame keessaa baasnee qilleensi akka rukutu goonerra, Qubee afaan Oromoo eenyyuu itti hin bu’u, Jijjiirama gama hundaan eegalame galmaan gahuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota waliin qindaa’ee yoo hojjate bu’aa qabaa fi kkf odeessuun xibaaraa jira. Haasofni inni tarrisu cufti dhugaadhaan Oromoof dhaabbatee osoo hin tanee haasawa shiraa isa mitaa fi mitigaan guuttameedha, ajandaan afanfajjessiin Lammaa Magarsaa ittiin ololaa jiru kun, projectii Abbaay Tsahayee fi qaamota tikaa TPLF akka ta’e ifa galaa dha. Dubbii Lammaa kana irraa ka’uuni “Kan Eboon Isaa Dhiiga Hin Qabnetuu Arrabni Isaa Dhiiga Qaba” kan jedhameefis.
Waan ta’eefis Ummanni Oromoo keessaa fi alaan jrru, addatti ammoo biyya keessatti bobaa diinaa jalatti kanneen argamtan, aggammiin diinni yeroodhaa yerotti tooftaa jijjiruun eenyumaa keenya dhabamsiisuuf taasisaa jiru raffisee nu bulchuu hin qabu. Olola Afan-fajjii dinni dhimma itti bahee karaa fodda tv isaatii fi sab-himaalee hawaasaatiin ololuu fi karaa dabballoota isaan lallabuun dagamuu hin qabnu! “Mala Sardiidoon Beektu Qamaleen hin wallaltu” kanaaf ummanni Orommoo gabrummaatti xumura gochuun dirqii dha.
Baarri keessa jirru jaarraan 21ffaan bara hadhaan boru, boruun iftaani, Iftaaniin Waggadha jechuun Obsa Lakkawanuu Osoo hin tane, bara itti kaanee Qaanqee nu qabatte of irraa dhaamsinuudha.
Utubaan hanga dhiisanii fi hanga dhiiban qaba” Ummanni Oromoo bal’aan addatti ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa FXG finiinsuun yeroon dinne didaan dina keenya of irraa fon qolchinu amma!
Walumaa galatti diina boortaan nu gabroomsee Qucee/boquu ol qabachiisuu nu dhoowwe of irraa fonqolchinee biyyaa fi biyyoo keenya irratti abbaa ta’uuf , tokkummaadhaan kaanee QBO ABOn durfamu cinaa hiriirree WBO gaachana sabaa tumsuu fi utubuun yeroon hawwii fi fedhii keenya galmaan geenyu amma ta’uu qaba!
Lemmaa Megersa “the facilitator” talks empty talk to the people of ..